အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့စင်ပေါ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-bestparticleboardfurniture.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့စင်ပေါ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 010-57-1
ချိုးငှက်စာအုပ်စင်5ပုံး၏ဖွဲ့စည်းထားသည်.အဖြူများ၏ပေါင်းစပ်,မှောင်မိုက် backboard နှင့်အတူလွင်ပြင်အဓိကခန္ဓာကိုယ်အမျိုးမျိုးသောဂျီသြမေတြီနေရာများပြသ.ပါရောဂါအတွက်ဂျီသြမေတြီပုံစံမျိုးစုံတစ်ဦးငြိမ်းချမ်းရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ချိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏,လူများကနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျစေ.အဆိုပါဖြည့်စွက်သည့် LED အာကာသကိုတက် brighting နှင့်အလှဆင်၏ဒဏ်ငွေ texture မီးမောင်းထိုးပြဘို့အလင်းပရောဂျက်နိုင်ပါတယ်.သငျသညျအလိုတော်မှာ5စင်ပေါ်စီစဉ်စေခြင်းငှါ,ထိုသို့နှင့်အတူတစ်ဦးအာကာသတစ်ခုဉာဏလေထု add.
အတိုင်းအတာ:W က 275cm x ကို: D 33cm x ကို H ကို 210cm
ပစ္စည်း:E1-V313 မှုန်ဘုတ်အဖွဲ့(M က.F ကို.ကို C.) (chip ကိုဘုတ်အဖွဲ့)အဆိုပါဗီဒိုအဘို့,တံခါးနှင့်စင်ပေါ်.
တံခါးပေါက်:18mm E1-V313 မှုန်ဘုတ်အဖွဲ့.
Backboard နှင့်အံဆွဲအောက်ဆုံး:8 မီလီမီတာ E1-V313 မှုန်ဘုတ်အဖွဲ့.
edge တီးဝိုင်း:ပြားများနှင့်တံခါးများအပေါ်ကို ABS အစွန်း banding.
LED panel ကိုအလင်း:3W-warmwhite
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestparticleboardfurniture.com/my/particle-board-shelving.html
အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့စင်ပေါ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့စင်ပေါ် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ OEM ODM-ကျော် 96,299 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestparticleboardfurniture.com